သင့်လုပ်ငန်းကို Social Media Marketing ပိုင်းနဲ့လုပ်ကိုင်မယ်ဆို ဘာတွေသိထားသင့်လဲ? -
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကိုလိုက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် ပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာတွေကို လေ့လာပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဖြစ်လာစေဖို့ အတွက် Digital Marketing နယ်ပယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Social Media Marketing နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာအချို့ကို ဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်…
၁. တစ် အချက်အနေနဲ့ စတင်ရမှာကတော့ သင့်ရဲ့ Targeted Audience တွေကို Research ပြုလုပ်ရပါ မယ်။ Research သေချာပြုလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ ဘယ်အကြောင်းအရာက Audience နှစ်သက်မလဲ? ဘယ်လို Topic မျိုးကို စိတ်ဝင်စားလဲ? ဆိုတာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၃. Social Media ပေါ်မှာသင့်လုပ်ငန်းအတွက် Social Media Post တွေတင်ဖို့ အတွက် Content တွေ ဖန်တီးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Content တွေဖန်တီးရာမှာ လွယ်ကူစေရန်အတွက် Topic တွေ Headline တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Link တွေကို ပြင်ဆင်ထားဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
၄. လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းရဲ့ ရလဒ်တွေကို သိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ KPI ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ KPI (Key Performance Indicator) ကတော့ မိမိလုပ်ငန်းမှာရရှိ ထားတဲ့ ရလဒ်တွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင် မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းတိုးတက်လာမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅. Customer တွေဆီက Question & Answer တွေကို ဖြေကြားပေးနိုင်မယ့် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်လောက်ခန့်ထားဖို့ လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ Question & Answer တွေကို Ignore လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်လုပ်ငန်း အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေကတော့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို Social Media Marketing ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်ပြီး အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အချက်တွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Saturday June 29th, 2019/ Blog/0Comment